Maalinta: Meey 12, 2020
Waa inaan ilaalinaa Warshadaha Duulista
Isagoo ku nuuxnuuxsadey in horumarada warshadaha duulista ay si xun u saameyn ku leeyihiin dhoofinta dhoofinta, ayuu madaxweynaha Eskişehir OSB Nadir Küpeli yiri, "Horumarka warshadaha duulimaadyada rayidka adduunka waxay bilaabeen inay saameyn ku yeeshaan dhoofintayada, waaxda duulista, taas oo isha ku haysa warshadaha Eskişehir. Difaaca iyo [More ...]
Bayaanka ay soo saartay TCDD, waxaa lagu cadeeyay in lagu buufin doono wadooyinka tareenka oo cinwaanada lagu cayimay 10 maalmood in aan lala soo xiriirin. The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD), inta u dhaxaysa 14 May ilaa 1 June 2020 by Agaasinka Guud ee taariikhda, Konya-Akşehir, [More ...]
Xakamayn adag ee Suuqyada Suuqyada iyo Suuqyada Dadweynaha ee Ankara
Qeybta Booliska Magaalada Ankara ee Magaalooyinka waa weyn iyo kooxaha waaxda caafimaadka ayaa adkeeyay kormeerkooda kadib furitaanka Suuqyada Suuqyada iyo Suuqyada Dadweynaha, kuwaas oo si kumeel gaar ah loo xiray sababo la xiriira tillaabada coronavirus tan iyo 21-kii Maarso. Dadka [More ...]
Taageerada Nadaafadda ayaa wali kusii socota Ganacsatada Dolmuscu ee Ankara
Qeybta Booliska Magaalada Ankara ee Magaalo Weyn ayaa wali sii wada taakuleynta ganacsatada dolmus kuwaas oo shaqooyinkoodii la naaqusay kadib dillaaca coronavirus. Marka lagu daro hannaanka jeermis-ka-qaadista ee gawaarida yar yar, Ankara waxay bilawday inay qaybin karto xirmooyin cunto ah Ramadaanta darteed [More ...]
2/7 Asphalt Shed oo loogu talagalay Bandhigga 24-maalin ee Caasimadda
Marka la eego baaxadda dagaalka lagula jiro cudurka faafa ee coronavirus, Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay ka shaqeysay 2/7 hibo eey ku jirto bandowga 24-maalmood ee lagu dhawaaqay Caasimadda. Laga soo bilaabo Altındağ ilaa Çankaya, min Etimesgut ilaa Yenimahalle, oo kuyaal 52 dhibcood magaalada [More ...]
Cudurka Coronary Virus-ka looma aqbalin sidii shil shaqo
Rugta Sharciga ee Warshadaha Eskişehir ayaa diyaarisay warbixin qiimeyn ah oo ku saabsan heerka sharciga ah ee dadka la il daran cudurka Coronavirus. Warbixinta la diyaariyey, oo ku saabsan heerka sharciga ah ee dadka lagu qabto coronavirus-ka shaqada ama ka baxsan goobta shaqada. [More ...]
Waxaa Loogu Baaqay Gaadiidka Caafimaadka
Baadhitaannada kooxaha booliiska ee Dawladda Hoose ee Magaalaweynta Kayseri iyo macluumaadka ku saabsan u hoggaansanaanta tallaabooyinka coronavirus way sii socdaan iyaga oo aan gaabin. Wadayaasha tagaasida ganacsiga ayaa markan ogeysiiyay kooxaha booliska. Kooxaha bilayska Dawladda Hoose ee Magaaladda waxay joojinayaan tagaasida [More ...]
Laanta Labaad ayaa laga furay Gültepe dukaanka dadka laga ganacsado
Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir waxay furtay laanta labaad ee Halkın Bakkalı, oo loo direy Kemeraltı Bazaar, degmada Gültepe ee Konak. Madaxweyne Tunç Soyer furitaanka iyadoo ay ka qeyb galayaan dad aad u tiro yar sababa la xiriira tillaabada coronavirus: “Waa wax aasaasi ah [More ...]
Xiisaha Weyn ee Baadhitaanka Shineemooyinka Dibadda! Rikoodhadii ayaa dhacay 19 sekan
Baadhitaanka shineemooyinka ee Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir 15-kii Maajo Jimcaha ayaa soo jiidatay dareen weyn. Diiwaangelinta ayaa lagu dhammeeyay 19 sekan gudahood dhacdada halkaas oo filimka "Dealer Kulan" filimka isla mar si isku mid ah looga baari doono lixda qodob. dhacdo [More ...]
Gendarmerie iyo ciidamada ilaalada xeebaha waxaa lagu soo daray kuwa ka faa iideysta gaadiidka dadweynaha oo lacag la’aan ah. Go'aanka Madaxweynaha wuxuu dhaqan galay 8 Maajo. Gendarmerie iyo Xeebta ilaa saraakiisha fulinta sharciga ee ku raaxeysta isticmaalka bilaashka ah ee gaadiidka dadweynaha ee Turkiga [More ...]
Hawlgalkii ay sameeyeen kooxdii ilaalada Kastamka Kastamka ee Kastamka Kastanka, 8 kun 800 waji-badbaadin caafimaad oo qiimahoodu ahaa 573 milyan 750 kun liras ayaa la qabtay. Agaasinka Guud ee Howlgallada Dhaqangelinta Kastamyada [More ...]
Golaha Cilmi-baarista Sayniska iyo Teknolojiyadda ee Turkiga (TUBITAK) ayaa lagu shaacin doonaa 2 shaqaale oo joogto ah bayaan. Si loo dalbado xayeysiinta, waxaa lagama maarmaan ah in laga diiwaangeliyo Nidaamka Codsiga Shaqada "www.bilgem.tubitak.gov.tr". (Dib ugulaabo codsi) [More ...]
Dunida ugu horreysa "ugaarsadeyaasha fayraska" ayaa isu yimaada si ay u joojiyaan faafidda faafa ee mustaqbalka iyagoo kharibaya dhammaan fayrasyada ku jira xayawaanka duurjoogta ah ee ku dhici kara aadanaha ku jira xayawaanka duurjoogta ah. Ururka iskaashiga sayniska ee loo yaqaan Global Virome Project [More ...]
Aqoonyahan Dr. Timur Timurkaynak wuxuu yidhi, "Waa inay iska ilaaliyaan dhiig karka iyo sonkorta. Gacmaha oo aad ku dhaqsato waa qasab. Si loo ilaaliyo nidaamka difaaca jirka, hurdo caadi ah, nafaqo caafimaad leh, nafaqada ku saleysan cuntada Mediterranean, khamriga xad dhaafka ah [More ...]
Ururka Shaqaalaha Gaadiidka ee United (BTS) ayaa ku dhawaaqay in khadadka lagu gaarayo dekada iyo aagagga dhaqaajinta ee loo isticmaali doono aagga Sirkeci Port iyo aagagga socodka ee loo adeegsado ayaa gaaray heerkii ugu dambeeyay ee diyaarinta borotokoolka. Golaha Dhexe ee BTS [More ...]
Shisheeyaha Hit Heesaha? 2019-2020 Heeso Shisheeye?
Waxaa ka mid ah heesaha shisheeyaha ku dhuftay, waxaa jira heeso aad u guul badan. heeso shisheeye, xitaa haddii aadan aqoon macnaha, waxay lahaan kartaa madadaalo aad u xiiso badan oo dhaqaaq leh. Sidaa darteed, badankooduna waa shisheeye [More ...]
Şakir Zümre ma uusan u qorin xusuustiisa si faahfaahsan. Waxaa laga yaabaa inuusan helin waqti uu ku qoro. Şakir Zümre wuxuu lahaa dabacsan dabacsan. Kama uusan hadlin adeegga waddankiisa ama saaxiibtinimadiisa Atatürk. [More ...]
Waa kuma Gazi Yaşargil?
Wuxuu ku dhashay Julaay 6, 1925, isagoo ah gudoomiye degmo oo ka tirsan Lice, Diyarbakır. Dhinaca hooyadu waxay ka timaadaa badda madow, dhinaca aabaha wuxuu ku saleysan yahay qoyska ay ka soo jeedaan qabiilka Kayhan oo markii hore degay Beypazarı. Aabihiis Asım bey wuxuu ku dhashay Diyarbakır sanadkii 1924. [More ...]
Waraaq ka socota Galata Tower una socota Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Ersoy oo ka socota Imamoglu
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu soo saaray warqad laxiriirta go'aanka lagu wareejinayo Galata Tower, oo ah hanti degmadu leedahay, wasaarada dhaqanka iyo dalxiiska. Way iska cadahay in Madaxweyne Imamoglu warqad u qoray Mehmet Nuri Ersoy, Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska [More ...]
EGİAD Waxay Soo Saaraysaa Dhaqaalaha Miiska
Ururka Ganacsatada Da'da yar ee Aegean EGIAD ayaa soo qabanqaabiyay aqoon-isweydaarsi websaydh ah "Muuqaalka Macroe Dhaqaalaha ee Isku-Darka Ka Dillaaca" si looga wada hadlo loona qiimeeyo saamaynta cudurka Covid19 ee dhaqaalaha. Xoghayaha guud ee xubnaha EGİAD [More ...]
Safarada Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Istanbul
Ka dib markii dhacdooyinka Covit-19 ay bilaabeen inay soo muuqdaan, waxaa hoos u dhacay tirada dadka jidka ugu taga dhamaadka dhamaadka Maarso. Si kastaba ha noqotee, usbuucii ugu dambeeyay ee Abriil, koror 30,4 boqolkiiba ah ayaa la diiwaangeliyay marka la barbar dhigo dhammaadkii Maarso. Boqolleyda celceliska dadka [More ...]
Goorma ayuu 42 Jirka Saldhigga tareenka Evler dhammaanayaa?
Shaqadu waxay ka sii soconaysaa xarunta Izmit 42 Evler ee khadka cusub ee udhaxeeya Arifiye iyo Pendik oo tareenka magaalada ku yaal uu isticmaali doono. Idaacadda ayaa la filayaa in la furo Agoosto. Sida uu sheegayo warka Muharrem Şenol ee ka socda Özgür Kocaeli; “Tareenka dhulka hoostiisa ee Izmit 42 Evler [More ...]
Geedi socodka Asphalt Palon ee Izmit Gültepe Junction waa la dhameystiray
Iyadoo sii wadaysa dadaalkeeda si gaadiidku uga dhigto mid ku habboon magaalada oo dhan, ayay Kocaeli Magaalo-Weyne ay dhagxaan ku dhigtay isgoyska hortiisa ee Orduevi ee Izmit Büyük Seka Tunnel usbuucii hore. Sayniska [More ...]
Codsiyada Bilaashka ee la hakiyey waxay ka bilaabmeen İzmir
Codsiyada waxay bilaabeen in loo helo codsiga 'qaan-sheegashada sugaya', kaasoo sidoo kale laga hirgaliyay Izmir kadib Istanbul. Macaamiisha, oo leh dhibaatooyin dhaqaale sababihii adduunka ka dilaacay, waxay keydsan karaan biilashooda biyaha ee nidaamka iyagoo adeegsanaya websaydhka "Biz İzmir". [More ...]